Edere site Tranquillus | Jul 25, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ndụmọdụ ndị ọrụ mmepe bụ ụdị enyemaka enyere ndị niile nọ n'ọrụ na-achọ inwe echiche doro anya gbasara ọnọdụ ọrụ ha. Ndị a bụ nzukọ enyere ikike nke na-elekọta usoro a. N'oge nnọkọ, na-abụghị oge ọrụ gị, yana onye ntụzi aka. Ga - enwe ike ịkọwapụta oru ngo ọhụụ ma rite uru na ndụmọdụ banyere otu esi eme ya. Nke a bụ ohere iji mee nhọrọ ndị mara mma dabere na ndụmọdụ nke ọkachamara. Ihe a niile bụ n'efu.
Ndụmọdụ mmepe ọkachamara: akwụkwọ nchịkọta
Ndụmọdụ ndị ọkachamara na-esite n'aka onye ọkachamara, ọ dị mkpa na ajụjụ ndị a na-agba na ya, nke ahụ bụ ịhaziri onwe gị. Therefore ga - enweta ndụmọdụ na ntuziaka dị mma ga - enye gị ohere ịmalite ma rụọ ọrụ ọkachamara dị adị. Ntọala na nkà gị na ahụmịhe gị.
Ihe mmezi a ga-eme ga-eduga n’otu oge iji mepụta akwụkwọ nchịkọta. Nke a na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ihe ịga nke ọma nke nkwado. Ọbụna ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe ntụaka n'oge niile n'ihi ozi ndị dị mkpa dị na ya.
Ya mere, akwụkwọ a na-anọchi anya usoro a ga-esi tinye n'ọrụ nke na-abịa n'ụdị dị iche iche, n'etiti ndị ọzọ, enwere ike ịnweta ọzụzụ ruru eru maka CPF (Akaụntụ Ọzụzụ nkeonwe). Mara na ndị niile ritere uru CEP nwere ike nweta akaụntụ a. Nke a na - enye ohere dị mfe ma baa uru na ndụmọdụ mmepe ọkachamara. Ihe sistemu abuo a n’ezie nkwado, karia ndi oru na ndi isi oha.
Ọganihu nke CEP na-akwado
Usoro nke ọkachamara ọkachamara n'ịzụ ọzụzụ dịgasị iche site na otu nlekọta lebara anya na nke ọzọ. Ntuziaka ga-anwa ịmatakwu gị nke ọma: njirimara gị, ọrụ gị, ọkwa ọgụgụ isi gị, ọnọdụ mmekọrịta gị, omume gị, ahụmịhe gị dị iche iche.
GỤỌ Gịnị mere ị ga-eji dozie ma rụọ ọrụ na France?
N'ezie, onye ọ bụla na-erite uru na ya nwere ọrụ aka ha, ya mere nkwado dị iche iche. Onye na - atụgharị uche, dị ka aha ya si gosi, ekwesịghị ịmanye gị echiche gị. Ọ kwesịrị iduzi gị ma dụọ gị ọdụ. Help ga - enyere aka ịkọwapụta ezigbo ọrụ ọkachamara. Nke a gha eduga n’iru mmepe. Iji mezuo nke a, onye na-azụ ọzụzụ na-eji ihe niile dịnụ eme, gụnyere ahụmịhe nke ya.
N'ikpeazụ, n'oge nkwado CEP, onye na-enye ndụmọdụ nwere ọrụ nkwado nke nhọrọ ọzụzụ gị na gị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ ga - enyere gị aka ịhazi ego maka ihe ịma aka ọhụrụ gị. Ma ga - agwa gị ikikere gị na mmezu nke ọrụ gị.
Nzube gị bụ iduga gị gaa nke ọma. Otu abụọ a, nke ahụ bụ, onye na-enye ndụmọdụ na isiokwu a na-akwado, ga-enwerịrị ebumnuche dị iche iche na-enweghị atụ.
Kedu onye nwere ike irite uru na ndụmọdụ mmepe ọkachamara?
Ndụmọdụ banyere mmepe ọrụ bụ maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ, ya bụ ndị ọrụ nke ọha, ndị ọrụ nkeonwe, ndị ọrụ aka onwe ha, ndị omenkà na ndị na-achọ ọrụ.
Ndi mmadu n’aru oru imetuta ego, umuaka na-aha hapu akwukwo ha ma obu ha enweghi akwukwo. Ndị ji aka ha rụọ ọrụ na-enwekwa nchegbu. Iji nweta ụdị nkwado a, ihe ị ga - eme bụ ịrịọ ya.
Ọ bụrụ na ị ka bụ nwa akwụkwọ mana ị na-arụ ọrụ. Ndụmọdụ ndị ọkachamara na-enyere gị aka iji nwayọọ nwayọọ jikọta ụwa nke ọrụ ka ị na-aga n'ihu imeziwanye nkà gị na ọrụ gị. Otu a na-aga maka ndị lara ezumike nka chọrọ ịbanye n’ọrụ ịchụ nta ego, dịka ọmụmaatụ.
N’ezie, CEP mejuputara ngwaọrụ nkeonwe na nke efu nke ndi n’iile ma obu ndi n’enweghi oru nwere ike igbanye. A na-enye ya site n'aka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ onye na-akwado nkwado ya na ozi nzuzo zuru oke. Ndụmọdụ a na-enye na-abụ n'ezie ihe nzuzo. Otu a ka ọ dị maka ozi onwe onye niile gbasara onye nyere ya uru.
Kedu òtù CEP ka akwadoro
Ọ bụghị ndị niile erite uru na ndụmọdụ mmepe ọkachamara nwere otu ọnọdụ. Ha kwesiri ịkpọtụrụ òtù CEP nyere ikike, dị ka ibe ha si dị.
Ndi otu nyere ikike inye udiri oru aka ndi a Cap ọrụ, maka ndị niile nwere nkwarụ, locallọ Nzukọ Alaeze, na ngalaba ọrụ na Association maka ọrụ nke ndị isi ma ọ bụ Apec.
Rịba ama na onye ọrụ nwere ikike irite uru na ndụmọdụ mmepe ọkachamara na-arịọghị ikike nke onye were ya n'ọrụ. Ọ ga-eme naanị oge ọhụhụ na onye ndụmọdụ, ọkacha mma na nke ahụApec ọ bụrụ na ọ nwere ọkwa ọrụ na ụlọ ọrụ ọ na-arụ ọrụ.
Maka ndị ọrụ nkịtị na-abụghị ndị isi, ha nwere ike ịkpọtụrụ ndị ndụmọdụ ndụmọdụ nke Kọmitii nkwonkwo ọkachamara na mpaghara ma ọ bụ CPIR.
N'ikpeazụ, ndị were ọrụ ga-eme ka ndị ọrụ ha mara na ha nwere ike irite uru na ndụmọdụ mmepe ọkachamara. Ha nwere ike ime nke a n'oge ọ bụla (n'oge ajụjụ ọnụ ọrụ ma ọ bụ n'oge oge ma ọ bụ nzukọ pụrụ iche, wdg).
Ọnọdụ ndị ọzọ maka iji CEP ga-abara gị ezigbo uru
Ọ dị mkpa ịchọ ndụmọdụ mmepe ọkachamara ụfọdụ n'ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara. You na-agafe oge mgbanwe ọkachamara. Chọrọ ichere mmegharị nke ọkachamara ma ọ bụ nnyefe ọrụ ga-ekwe omume. Na-eche echiche ịmalite ma ọ bụ iweghara azụmaahịa.
Ọnọdụ ndị a mejupụtara oge siri ike. Ndụmọdụ ọkachamara na enyemaka nwere ike ịba uru. Ma ga - echekwa gị ọtụtụ nsogbu ị na - echeghị.
Developmentnye Ọzụzụ Ọmụmụ Nkwado Ọkachamara July 26th, 2020Tranquillus
gara agaAkaụntụ Ọzụzụ nkeonwe (CPF)
-esonụKwupụta ọpụpụ gị na oge ezumike nke nne gị nye onye were gị n'ọrụ